फेवाताल मिचेर होटेल बन्न थालेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा
ताल मिचेर होटेल बनाउने र शौचालयको पानी तालमा खन्याउने व्यवसायी नै सरकारका पर्यटनविज्ञ
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवा अतिक्रमण गरेर होटेल बनाउन लागेपछि तत्काल रोक्न ०६८ मा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । होटेल बनेर सञ्चालनमा आएको सात वर्ष भइसक्यो, तर सर्वोच्चको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ । १० असार ०६८ मा शाक्यले पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनाउन सुरु गरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । त्यसअघि समग्र फेवाताल संरक्षणको माग गरेर सुवेदीले नै १० माघ ०६७ मा पनि रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्चले दुवै रिटलाई सँगै राखेर अगाडि बढायो । समग्र फेवातालको मूल मुद्दामा सर्वोच्चले १६ वैशाख ०७५ मा फेवातालको पक्षमा फैसला ग-यो । तर, शाक्यको रिसोर्टको मुद्दा अभैm विचाराधीन छ । मुद्दा परेको सात वर्षपछि सर्वोच्चले रिसोर्टको विषयमा छानबिन गर्न भनेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने समिति बनाएर ‘शाक्यको रिसोर्टले जग्गा मिचेको हो–होइन तथा रिसोर्टको फोहोर पानी तालमा हालेको छ–छैन’ छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
आदेशअनुसार १६ जेठ ०७५ मा प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मी नेतृत्वमा गठित समितिले रिसोर्टको फिल्ड भिजिट गरेको थियो । रिट निवेदकका हैसियतले अधिवक्ता सुवेदीलाई पनि नापजाँचका क्रममा बोलाइएको थियो । समितिले किनारबाट १५ मिटरभित्र तालबाटै नाप लिँदा पनि रिसोर्टका अधिकांश संरचना मापदण्डविपरीत बनेको भेटिएको थियो । समितिले प्रतिवेदन भूमिसुधार सचिवलाई बुझाएको छ । सचिवले सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन् । तर, मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
छानबिन समितिले शाक्यले फेवा अतिक्रमण गरेर रिसोर्ट बनाएको ठहर गरेको छ । साबिकको ग्यारजाती गाविस वडा नं. १ को कित्ता नं. १७३, वडा नं. ५ को कित्ता नं. ३०४ र ३०५ सार्वजनिक जग्गा शाक्यले अतिक्रमण गरेको जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘तीन कित्तामा रहेको ५४३.३ वर्गमिटर पर्ती जग्गा विशाल पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले अतिक्रमण गरेको भटियो,’ संयोजक रेग्मीको भनाइ छ ।
१५ असार ०६४ को कास्की जिल्ला परिषद् र २८ साउन ०६४ कै पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकले फेवातालको वरिपरि ६५ मिटरसम्मलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गर्दै संरचना बनाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यही संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमण गरेर शाक्यले रिसोर्ट बनाएका हुन् । उनको रिसोर्टको स्विमिङ पुल, पानी शुद्धीकरण गर्ने भनिएको ट्यांक, स्विमिङ पुलसँगै रहेको शौचालय, बगैँचा, गाडी पार्किङ स्थल, मूलगेट र पालेघरलगायत संरचना ताल क्षेत्रभित्र छन् । समितिले ०३२ को नापीअनुसार तयार भएका कित्ता नापी नक्सालाई आधार मानेर रिसोर्टको जाँचबुझ गरेको हो ।
रिसोर्ट बनाउन शाक्यले ०६२ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग स्वीकृति मागेका थिए । नगर विकासले आफ्नो क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै स्वीकृति दिएन । तर, समितिका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद ढुंगानाले ०६६ भदौमा अवैध रूपमा पत्र लेख्दै शाक्यलाई संरचना निर्माण गर्न दिन तत्कालीन सराङकोट गाविसलाई लिखित सिफारिस गरिदिए । त्यही आधारमा गाविसले तालभित्रै थुपारिएको माटोको ढिस्कोलाई तालको सीमा मानेर ६५ मिटर संरक्षित क्षेत्रभित्रै संरचना बनाउन स्वीकृति दिएको थियो । शाक्यले ०६७ मा संरचना निर्माण सुरु गरेका थिए । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगे पनि शाक्यले निर्माण रोक्नु परेन । अहिले होटल सञ्चालन भएको पनि सात वर्ष भइसकेको छ ।
शाक्यको रिसोर्टले फेवाको वातावरणीय मापदण्ड पनि मिचेको छ । छानविन समितिले विज्ञको उपस्थितिमा शाक्यको होटेलबाट निस्केको पानी परीक्षण गर्दा फेवाका जलचर नै मार्ने रसायन भेटिएको थियो । शाक्यको रिसोर्टबाट फेवामा मिसाइएको पानीको नमुना परीक्षण गर्दा लिड, एमोनिया र कोलिफर्म अत्यधिक भेटिएको थियो ।
सामान्यतया पानीमा प्रतिलिटर १.५ मिलिग्राम एमोनियाको मात्रा हुँदासम्म पिउनयोग्य नै मानिन्छ । जलचरका लागि त्यसमा केही बढी एमोनिया भए पनि हुन्छ । तर, वाटर फ्रन्ट रिसोर्टबाट निस्केको पानीमा एमोनियाको मात्रा प्रतिलिटर २७.२ एमजी देखिएको थियो । यस्तो पानीमा माछा जीवित रहन सम्भव नहुने मत्स्य प्राविधिक रामकुमार श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै शाक्यको रिसोर्टबाट निस्केको पानीमा लिडको मात्रा ०.१२ प्रतिलिटर भेटिएको थियो । जब कि प्रतिलिटर ०.०२ देखि ०.०४ सम्म भए पनि माछाको गिल्स नै ड्यामेज हुने मत्स्य वैज्ञानिक अग्निप्रसाद नेपाल बताउँछन् । शाक्यको रिसोर्टबाट शुद्धीकरण गरेर फेवामा मिसाइएको भनिएको पानीमा सय मिलिलिटर कोलिफर्म भेटिएको थियो ।
शाक्यले होटेलसम्म पुग्न लगेको बाटोछेउमा पनि अहिले धेरै घर–टहरा बनिसकेका छन् । ती घरबाट निस्किने ढलसमेत सोझै फेवा तालमा मिसाइएको छ । शाक्यले निकास नदिएको भए त्यस क्षेत्रमा घरटहरा बन्ने थिएनन् र फेवा प्रदूषित हुनबाट केही हदसम्म जोगिने थियो । ‘सर्वाेच्चको आदेश पालना हुने हो भने फेवाको धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छ,’ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले भन्छन् ।
ताल मिच्ने व्यवसायी सरकारी पर्यटनविज्ञ
सरकारले फेवाताल अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई नै पर्यटनविज्ञ बनाएको छ । पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट सञ्चालक सुनील शाक्य (कर्ण शाक्यका छोरा)लाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आफू नेतृत्वको विज्ञ समूहमा मनोनयन गरेका हुन् । शाक्य अहिले पनि पर्यटनविज्ञकै हैसियतमा छन् । १४ वैशाख ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्री अधिकारीले २९ जनालाई विज्ञमा नियुक्त गरेका थिए ।
शाक्यलाई २८औँ नम्बरमा राखेका थिए । देशको पर्यटन विकासमा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध भई विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभव उपयोग गर्न विज्ञहरू नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर, आफ्नै क्षेत्रको ताल अतिक्रमण गर्ने र ताल दूषित गर्ने व्यक्तिलाई विज्ञ समूहमा राखेपछि पोखरामा मन्त्री अधिकारीको आलोचना भएको थियो । नयाँ पत्रिका
याे पनि पढ्नुहाेस् - पाेखराकाे फेवातालमा विदेशी महिलाको अश्लिल फोटोसुट !
भेटाए कारबाही गर्छँ: पर्यटक प्रहरी
निगरानी नै फितलो भएको हो की? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘गस्तीका क्रममा भेटिएका वा सूचनाको आधारमा नग्न हिँडिरहेका अवस्थासमेत फेला पारेकालाई कानुन अनुसार कारबाही सिफारिस गरी उनीहरुकै देश फर्काउनेसम्म गरेका छौँ।’
इन्स्टाग्राममा नग्न तस्बिर अपलोड गरेकी रसियाकी ती महिलाले नेपाल छाडिसकेकी छन्। त्यसैकारण उनलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सम्भव नभएकाले सम्बन्धित विभागमा रिपोर्ट गरिने ती प्रहरी अधिकारीले बताए।